Toetry ny andro : hanerika sy handrivotra mafy eto afovoan-tany | NewsMada
Toetry ny andro : hanerika sy handrivotra mafy eto afovoan-tany
Nanao filazana sy fampitandremana momba ny tafiotra izay ho mafy amin’ny faritra avo eto afovoan-tany ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Voakasika Arivonimamo sy i Tsiroanomandidy sy ny manodidina azy. Iantefan’ny filazana koa ny faritra Sofia, Betsiboka ary ny morontsirak’i Mahajanga. Mety hahatratra 50 km ka hatramin’ny 70 km isan’ora ny herin’ny rivotra. Tokony hitandrina ny mpiandrika sy ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka atsinanana sy atsimo, indrindra izay hiala lavitra ny morontsiraka. Misy onja vaventy manana haavo any amin’ny 30 km any ho any ka hisamboaravoara ny ranomasina.
Matanjaka be ny “anticyclone » ao atsimon’ny Nosy, araka ny sary avy amin’ny zanabolana. Misarika rivotra feno hamandoana mankaty amintsika izy io. Vokany, miovaova ny toetry ny andro eto amintsika. Ho betsaka kosa ny rotsak’orana hiseho any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany ka mila mailo ny mponina amin’ny ho vokatr’izany. Ao anatin’ny roa andro misesy, hanorana tandrifin-drahona ny ilany atsinanana iray manontolo. Any Melaky, mety hisy orana arahin-kotroka, araka ny tombana nambaran’ny eny Ampandrianomby.
Hiverina indray ny hatsiaka
Momba ny toetry ny andro, anio, hahazo orana malefaka ny ilany atsinanana, ny maraina. Ho mafimafy ny orana any amin’ny tapany atsimon’ny faritra Atsinanana sy ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Atsinanana. Hanerika ny andro ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro any Boeny sy any Melaky. Hibaliaka ny masoandro any amin’ny faritanin’i Toliary. Amin’ny faritra hafa ankoatra ireo, handrahona ny andro.
Ny hariva, hitohy hanorana any Antalaha ary Maroantsetra. Hiitatra any Analanjirofo, any Atsinanana, any Vatovavy-Fitovinany, any Atsimo Atsinanana ary any Taolagnaro izany ny takariva. Handrahona ny andro ny ambin’ny ilany atsinanan’ny Nosy sy ny avaratra andrefan’i Madagasikara. Hanorana tandrifin-drahona ny andro any Melaky sy ny atitany ary ny faritra Atsimo Andrefana. Somary hanerika ny andro ho an’ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an’ny faritra sisa hafa.
Eto Antananarivo, 12°C ny maripana ambany indrindra raha 17°C ny ambony indrindra. Any Antsirabe, 8°C ny maripana ny maraina, hiakatra 16°C rehefa misava ny zavona.